[Chronicle] Varume veSwatini, pakati pegoreka kana musungwa, vasarudza! - YoungAfrica.com - TELES RELAY
HOME » kambani [Chronicle] Varume veSwatini, pakati pegoreka kana musungwa, vasarudza! - YoungAfrica.com
Mambo wekare wekuSwaziland ane chinangwa chekumanikidzira chikwata kune vateereri vake here? Imwe nyanzvi yezvekune dzimwe nyika inoti, hurumende inotsamwiswa uye shoko remuromo ndiro rinosara ...
Pane imwe nguva mutemo weGuinean unoita sekukumbira ruregerero nekuda kwemvumo yegarika, achitaura kuti "monogamy inova mutemo, kunze kwekuti 'chibvumirano chakajeka' chomudzimai wokutanga", mambo weSwatini anoramba achizvikudza neanobatana naye 14 uye vana vake vakawanda vanokoshesa vana vanopfuura 25. Kuti vateereri vake vatevere, zvino mambo anotarisa chinangwa chekuzvipira sechisimba here?
>>> VERENGA - Ziso reGlez: "eSwatini", zvematongerwo enyika zita racho
Ndizvo zvakataurwa na13 Mavhuro apfuura, mhizha dzepaInternet Mutambi weZambian, kunyora kuti mutungamiri wehurumende iyi yeSouth Africa angadai akaisa nharo nenyaya dzevarume vake nekuiswa mujeri kana vasina kuva mitaka kubva munaJune 2019. Grand seigneur, mutongi aisangove akagadzirira kutarisira mari yemari, asiwo kupa nzvimbo dzekugara kune vakaroorana vatsva. Pakati pezvomumwe murume nemudzimai, panofanira kunge pasina nguva isina musha muumambo ...
Mswati III kwete kuva wekuteerera zvirevo kunze kwezvaavo, hazvisi zvechikonzero chechitendero chaanenge achida kusimudzira dzimba dzevakadzi vakawanda. Iyo yakawanda yakabatanidzwa mutemo inotarisirwa kuti iwane huwandu hwenhamba hwevakadzi pamusoro pevarume muimbova Swaziland.
Hazvina chokwadi, zvisinei, kuti njodzi yekuvharwa kwemadzimai ndeye chinetso chinotyisa chevanhu kuSwatini
Hazvina chokwadi, zvisinei, kuti ngozi yekuvharwa kwemadzimai ndeye dambudziko rinosuruvarisa revanhu kuSwatini. Munyika iyi duku ine nyika, iyo vanhu vasingasviki mamiriyoni ehafu nehafu, tarisiro yehupenyu - inofanirwa mu 2016 mumakore e57,7 - ndiyo imwe yepasi pasi pose, asi umambo hune 31i yepamusoro-soro yevana vanofa, uye 59,57 ‰ mu 2012. Mikana yakaderera yevagari vemazera ekukwegura inogona kutsanangurwa ne27,2% yehutachiwana hweHIV / AIDS hwehuwandu hwehuwandu hwevanhu, humwe huwandu hwenyika. Zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevanhu vanogarawo pasi peurombo.
Nzvimbo dzehutano dzakawanda dzinofadza, nekunakidzwa kwemashoko, nemafungiro anofungidzirwa kubva kune Mutambi weZambian, zviremera zveSwatini zvakakurumidza kupikisa zvavanotaura se nhau dzakaipa, kuramba chirevo chekuti chirevo cheumambo, chekuzvidza nhau ye "inokuvadza" uye "inonyangadza", ichivhiringidza hurumende netsika yenyika ... pasina kana kudzivisa kukakavara kubva pakuwedzera. Akasekwa zvikuru nekuda kwekupukunyuka kwake, zvakare ichokwadi kuti Mswati III kazhinji akatambanudza tsvimbo yekusasvibiswa kuti yakaroverwa ...
VANHU & VANHU3,568